မျက်နှာဖုံးထုပ်ပိုးပစ္စည်းများစီးရီးစက်ရုံ - China Mask Packing Equipment Series ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူများ
OK-100 အမျိုးအစားမျက်နှာဖုံးအလိုအလျှောက် Cartoning စက်
အဓိကစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအင်္ဂါရပ်များ ၁။ အလိုအလျောက်အစာကျွေးခြင်း၊ သေတ္တာဖွင့်ခြင်း၊ လက်ဝှေ့ထိုးခြင်း၊ အသုတ်နံပါတ်ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ကော်ဖြန့်ခြင်း၊ ကျစ်လျစ်ပြီးကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ ရိုးရှင်းသောလည်ပတ်မှုနှင့်ညှိနှိုင်းမှု။ 2.Servo motor, touch screen, PLC control system နှင့် man-machine interface display တို့သည်လည်ပတ်မှုပိုမိုရှင်းလင်းပြီးအဆင်ပြေစေသည်။ အလိုအလျောက်မြင့်သောဘွဲ့ဖြင့်စက်သည်အသုံးပြုရလွယ်ကူသည်။ 3. အော်တိုပစ္စည်းစီစဉ်ခြင်းနှင့်သယ်ဆောင်ယန္တရား t ကိုမွေးစား ...
OK-102 အမျိုးအစား Mask အလိုအလျောက် Case Packer
အဓိကစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအင်္ဂါရပ်များ ၁။ ဤစက်သည်မျက်နှာဖုံးအိတ်ထုပ်ခြင်းအတွက်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၂။ ကတ်တွန်အစီအစဉ်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်ခြင်းနှင့်အလိုအလျောက်ဖွဲ့စည်းခြင်း။ ၃. အလျားလိုက်အိတ်ထုပ်ခြင်းနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုသည်၊ ပုံးဘေးနံရံကိုအလိုအလျှောက်ဖွင့်ပြီးနေရာချသည်။ လျှောက်လွှာ၏ 4.Wide အကွာအဝေး; ထုတ်ကုန်ထုပ်ပိုးအမျိုးမျိုးတို့ကိုတွေ့ဆုံရန်နိုင်ပါတယ်။ 5.Four-edge တိပ်တံဆိပ်ခတ်စက်、 ပူအရည်ပျော်ကော်စက်ကိုထည့်။ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ ...
အဓိကစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအင်္ဂါရပ်များစက်ကိုအကြိမ်ရေနှစ်ဆပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်ထိန်းချုပ်သည်။ အိတ်အရှည်ကိုချက်ချင်းခုတ်ဖြတ်လိုက်သည်၊ တစ်နေရာမှတစ်နေရာ၊ အချိန်နှင့်ရုပ်ရှင်ကိုသက်သာစေသည်။ လူသား - စက်မျက်နှာပြင်၊ အမှားပြသခြင်းသည်ထင်ရှားသည်။ မြင့်မားသော sensitivity အားဖြင့် photoelectric sensor track color အရောင်အမှတ်အသား၊ digital input အစွန်းတံဆိပ်ခတ်ခြင်းအနေအထား၊ အပူချိန်မှီသော PID ထိန်းချုပ်မှုသည် ...
OK-902 အမျိုးအစား Mask Bundling ထုပ်ပိုးစက်
အဓိကစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအင်္ဂါရပ်များအလိုအလျောက်အစာကျွေးခြင်း၊ မူရင်းဖန်တီးအိတ်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အိတ်ဆောင်ယန္တရားသည်အရွယ်အစားကိုပြောင်းလဲရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ ၎င်းသည်တစ်ခုတည်းသောသို့မဟုတ်မျိုးစုံမျက်နှာဖုံးများကိုအလိုအလျောက်ထုပ်ပိုးခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ Model & Main Technical Parameters Model OK-902 အမြန်နှုန်း (အိတ် / မိနစ်) ၃၀-၅၀ အိတ် / မိစက်အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) ၅၆၅၀mm (L) X16500mm (W) x2350mm (H) စက်၏အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) 4000kg Power Sup ...